Ducada qalliinka. ? Ka hor intaan wax laga qaban.
Salaadda qalliinka haddii aad u baahan tahay inaad gacanta u gasho qofka ugu sarreeya oo ah welwelka oo dhan ee umuuqda inay maskaxda la wareegaan.
Waqtiyadan, lahaanshaha iimaanka lagu dhejin karo waxay noqon kartaa mid muhiim ah, iyo rumaynta tukashada waxay ina siisaa nabad iyo xasilloonaan.
Marka ay timaaddo hawlgallada waxba kama fiicna in wax kasta gacanta loo geliyo Abuuraha wax walba abuuray.
Ereyga Eebbe wuxuu noo sheegayaa inuu isagu yahay dhakhaatiirteenna mana jiro wax aan Aabbaha weydiisano inuu ina siiyo. Kadib waxaan kaaga tageynaa ducada aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan galin qalliinka.
1 Salaadda qalliinka Maxaa loogu talagalay?
1.1 Qalliinka ka hor
1.2 U soo ducee hawl qaraabada
1.3 Markaa wax walba si habsami leh ayey ugu socdaan qalliinka
2 Jumladahu ma shaqeyn doonaan?
Salaadda qalliinka Maxaa loogu talagalay?
Qalliinka ka hor, inta lagu guda jiro iyo ka dib qalliinka waxaa jira daqiiqadyo murugo iyo xanuun ah Salaaddu waxay dejin kartaa dhammaan fikradaha qaldan iyadoo aan kordhineyno iimaankeena.
Waa inaan nahay Aamin erayga Rabbiga Wuxuu dhahay waxaan u qayshanahay isaga wuuna na bari doonaa waxyaabo waaweyn iyo waxyaalo qarsoon, waxyaalahaas waxaa ka mid ah inuu yahay bogsashada jidhkeena, xasilloonida ogaanshaha in Ilaah wax ku qabanayo annaga iyo iimaanka ogaanshaha inuu yahay kan camalka sameeya noo shaqeeya.
Salaadda oo dhan waa muhiim waqti kasta oo walaac laga qabo inagoo ah bini aadam ahaan waxaa nalooga qaadaa inaan ku noolaano.
Ciise Masiix laftiisu wuxuu nagu casuumay inaan aabbaha weydiinno magiciisa, sidaa darteed salaaddayada waxay had iyo jeer ku jiraan magaca Ciise, iyagoo u aqoonsanaya inuu yahay wiilkii Ilaah, oo dhammaantood xoog leh inuu ina bogsiiyo oo qalbigayaga ka buuxiyo nabad.
Samaynta jumlada ka hor intaan qalliin ahaan si toos ah loo faragalin waxay naga caawin kartaa inaan gaarno go'aanno wanaagsan sida takhtarka, xarunta caafimaadka, taariikhaha iyo xitaa habka qalliinka lagu sii wadi doono.
Sidaa darteed waa muhiim ma ahan oo keliya tukan ka hor intaadan soo galin qolka qalliinka laakiin marka hawsha geedi socodka cusbitaalka la bilaabo.
Qalliinka ka hor
Ilaahow waad i jeceshahay, ilaaliya oo i dhawr
Siinta xigmad iyo xirfad dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaad
U ogolow iyaga inay kuugu adeegaan jacayl iyo nasasho
Ciise Masiix, Sayidkeenna
Ujeedada salaadda ka hor hawlgalka ayaa had iyo jeer ah in Ilaah la wareego wax kasta oo ku dhici doona noolahayaga iyo in wax waliba si hagaagsan u socdaan, kuwan waa labada codsiyada ugu badan.
Salaadda markay tahay, waa inay caddaato inaan wajahayno daqiiqad aanan gacanta ku haynin waxa aan ahayn ama aan ahayn taasina waa tan ugu weyn ee innaga hoggaamisa inaan dareemno ammaan-darro.
La hadal Ilaah, sheeg walaacyadaada, uga sheeg amni-darrada, cabsida iyo wax kasta oo aad dareento, wanaag iyo xumaanba.
Adiga oo cod dheer ku dhawaaq in uu ku siinayo xakameynta noloshaada oo uga mahadceliyo guusha uu kugu siiyay.
U soo ducee hawl qaraabada
Sir, dhakhaatiir badan, kuwa jecel shaqadooda
Iyagu waa adeeggeenna.
Waad ku mahadsan tahay hadiyadda xigmadda
in aad isaga siisay.
Maanta, nolosha dad badan ayaa lagu badbaadiyaa xaalado hore u soo maray
Ma aysan heli karin wax dawo ama dawo ah.
Sayidow, adigu sii wad
milkiilaha nolosha iyo geerida.
Natiijada ugu dambeysa waxay ku jirtaa gacmahaaga rabbaaniga ah.
Sayidow nuur maskaxda iyo qalbiga
kuwa hadda jooga
Waxay ka taxadaraan inay bogsadaan jirkayga
Oo gacmihiisana ku hanuuni xagga xooggaaga rabaani ah.
Waad ku mahadsan tahay roonaantaada weyn.
Haddii qofka qarka u saaran yahay inuu galo qolka qalliinka uu qaraabo yahay, duco Waa in la sameeyaa kahor lana sii wado inta hawsha lagu jiro.
Waxaa muhiim ah inaan ogaano sida loogu gudbiyo tamar wanaagsan xubinta qoyskeena kahor inta aan lasoo dhexgalin, tani waxay kaa caawin doontaa inaad ahaato qof niyadsami leh iyo caqiido firfircoon.
Uma baryi karno xubin reerka ah oo leh fikir qaldan ama ka shakin kara waxa Ilaah sameyn karo waqtigaan, laakiin waa inaan ilaalinaa dabeecad rumaystaha oo siisa xoog, dhiirigelin, iimaan iyo dhiiranaan xubnaha qoyska ka hor qaliinka iyo dhamaadka wax walba. Had iyo jeer waa inaad Ilaah u mahadcelisaa.
Markaa wax walba si habsami leh ayey ugu socdaan qalliinka
Aabaha jannada, waxaan kaa baryayaa inaad i dhawrto oo aad i dhawrto
Igu caawi inaan ku aamino
Iyo in la helo geesinimo ku filan oo lagu maro qalliinka
Dhageyso cabsidayda iyo welwelkayga
Tilmaam oo u ducee dhakhaatiirta qalliinka si ay si sax ah u ogaadaan waxay u baahan yihiin inay sameeyaan
U ducee dhammaan daaweynta iyo daryeelka la i siin doono
Oo igu xoogee xooggaaga
Marka waxaan dareemayaa wanaag oo sifiican ayaan u bogsoonayaa
Waxaan weydiisaneynaa Ilaah inuu u soo diro malaa'igtiisa daryeelka qolka qalliinka iyo, sidoo kale, isaga oo weydiisanaya inuu xidho wax kasta oo shar ah oo doonaya inuu soo farageliyo waa laba codsi oo ansax ah oo aan codsan karno waqti kasta.
Waxa kale oo muhiim ah inaanu kuula socodsiin karno dhamaan dhageysiga wanaagsan ee aan rabno inaan aragno si tamartaas wanaagsan loosoo daayo oo ereygu ku rumoobo nolosheena ama tan xubin kastoo qoyska kamid ah, saaxiib ama isbarasho kusaabsan inay soo galaan mid ka mid ah habraacyadan.
Jumladahu ma shaqeyn doonaan?
Kaliya salaadda ayaa ka dhigaysa mid nabdoon oo xasilloon.
Ma jiraan wax kafiican oo aan aaminka Ilaahay aaminno marwalba.
Haddaad qalbigaaga ku aaminayso, Ilaah ayaa kaa caawin doona waqtigan aadka u xun. Salaaduhu waxay markhaati u yihiin guusha wax walba dunida.
Kaliya waxaan kugu baryayaa inaad aaminaad badan ku dhexjirto si waxkasta ay u hagaagaan.
Salaadda qalliinka ma waxay ahayd mid aad jeceshahay?
Haddii aad hayso wax talo-bixin ah oo salaadda ah, ha ka laba-labin inaad faallo ka bixiso qodobkaan.
Sidan u caawi dadka kale ee la soo mari doona isla dhibaatada hore u dhacday.
Raac Insha Allah.
Ducooyin badan oo ay Ilaahay ku baryayaan: